मुख्यमन्त्री पोखरेल सवार गाडीमा ढुंगा प्रहार – Khabarkhoj
मुख्यमन्त्री पोखरेल सवार गाडीमा ढुंगा प्रहार
खबरखोज सम्वाददाता	। २०७७ आश्विन १८, आईतवार १९:५५
बुटवल — प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको गाडीमा ढुंगा प्रहार भएको छ । काठमाडौंबाट भैरहवा हुँदै स्कटिडसहित गरेर बुटवल आउँदै गरेका मुख्यमन्त्री चढेको गाडीमा आइतबार साँझ साढे ६ बजे मिलनचोक नजीक ढुंगा प्रहार भएको हो । मुख्यमन्त्रीका अगाडि र पछाडि स्कटीडका ३ वटा गाडी थिए ।
गाडीमा ढुंगा प्रहारपछि मुख्यमन्त्रीसहित गाडीहरु फर्काएर प्रहरी तालिम केन्द्र रामनगर लगिएको छ । ढुंगा हानेको आरोपमा प्रहरीले मुक्तिराम पौडेल, छाया पोखरेल, मुक्ति पौडेल, कमला अधिकारी र बिष्णु पोखरेललाई पक्राउ गरेको छ । गाडी तोडफोड भएपछि प्रहरीले हवाई फायरिङ गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई देउवाको अपील - 'डा. केसीका मागमा देशले ऐक्यबद्धता जनाएको छ, पूरा गर्नुस्'
२०७७ आश्विन १८, आईतवार १९:५५
काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले २१ दिनदेखि अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीसँग अपील गरेका छन् । आइतबार सार्वजनिक अपील गर्दै देउवाले जनता र सिंगो देशले भावनात्मक रूपमा ऐक्यबद्धता जनाएका डा. केसीका माग पूरा गर्न आग्रह गरेका हुन् । तस्बिर : तोसिमा कार्की एक […]
२०७८ असार १६, बुधबार १७:५८